Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Olalaha Doorashada 2017 | jariibannews.com
Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Olalaha Doorashada 2017
Ololihii u dambeeyay ee loogu diyaar garoobayo doorashada Madaxweynaha ayaa caawa ka socota magaalada Muqdisho, 12 saacadood ka hor doorashada Madaxweynaha oo lagu wado inay dhacdo maalinta Berri oo Arbaco ah.
Musharaxiinta Madaxweynaha ayaa durbaba isku garbinaya helida codod ku filan oo ay ugu gudbaan wareega labaad, waxaana musharaxiinta is bedel doonka ay dadaal badan ugu jiraan sidii mid walba u noqon lahaa ninka ugu cododka badan.
Ololihii ugu weynaa ayaa caawa ka socda Hotelada Jazeera iyo SYL oo ah labada hotel ee laga dareemay dhaq dhaqaaqaad u ballaaran.
Sidoo kale guryaha iyo xarumaha ololaha ee Musharaxiinta ayaa iyana laga dareemayaa mashquul badan iyo kulamo aan kala go’laheyn, waxaana caawa ay tahay habeen aan la kala seexan doonin oo xarun walba oo olole ka socda uu waaga ugu baryi doonin shirar is daba joog ah.
Xildhibaano koox koox ayaa tagaya xarumaha ololaha Musharaxiinta, iyagoo kulamo la qaadanaya, waxaana la sheegayaa inuu socdo gor-gortan xoog leh oo ku aadan cododka xildhibaanada.
Warar soo baxaya ayaa sheegaya in Musharaxiinta qaar ay saqdii dhexe ee caawa bilaabeen inay boorsooyinkooda furaan, balse wali lama oga qiimaha uu gaaray halkii cod ee Xildhibaanka.
Musharaxiinta kala ah Shariif Sheekh Axmed, Maxamed C/llaahi Farmaajo, C/qaadir Cosoble Cali iyo Cumar C/rashiid ayaa la sheegay inay ololihii ugu xoogganaa ka wadaan xarumahooda.
Halka Xasan Sheekh iyo kooxdiisa ololaha ay caawa fiidkii laba jibaareen ololahooda, iyagoo doonaya inay sii xajistaan taageerada ay heystaan ee Xildhibaanada, kaddib bandhigii maanta ee Hotel SYL.
Dad badan ayaa saadaalinaya in doorashada Madaxweynaha ee berri ay noqon doonto mid aad u adag oo ay gaarto illaa wareeg 3aad, waxaana wax kasta la eegi doonaa sida wareega koowaad cododka loo helo.
Waa ay adag tahay in saadaaliyo waqti hore sida ay natiijada noqoneyso, qiyaasta soo baxaysa waxay sheegayssa in qaar ka mid ah musharixiinta sare u soo kacayaan, halka qaar kalena hoos u sii dhacayso rajadooda ah inay ku soo baxaan afarta ugu sareysa.
Illaa iyo xalay lagama seexanin Magaalada, kulamada aad ayay u fara badan yihiin, saadashana daqiiqad walba meel ayay u badan tahay, Wax kasta waa ay is bedeli karaan ilaa caawa saq dhexe illaa berri, maadaama ay socdaan shirar iyo shukaansi fara badan oo siyaasiyiinta sameynayaan.